Maxaa ka socda degaanka Bohol oo farsiisin u ah Shiikh Shaakir & ciidamadiisa? | Allbanaadir.com
Home GALMUDUG Maxaa ka socda degaanka Bohol oo farsiisin u ah Shiikh Shaakir &...
Maxaa ka socda degaanka Bohol oo farsiisin u ah Shiikh Shaakir & ciidamadiisa?
Wafdi iskugu jira Saraakiil ka tirsan xoogga dalka iyo ganacsato ka ambabaxay magaalada Dhuusamareeb ayaa ku sugan degaanka Bohol oo fariisin u ah Shiikh Shaakir iyo ciidamadii ahlu sunna ee dhowaan ka dagaalamay degmada Guriceel.
Wafdiga waxaa horkacaya Gen. laba Afle oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka Xoogga dalka oo dhawaan gaaray Dhuusamareeb, waxaana lagu soo waramayaa iney kulamo la qaateen madaxda Galmudug, iyagoo haatana la kulmay hogaanka ahlusunna.
Xubnahan ayaa isku dayaya iney Shiikh Shaakir iyo ciidamadiisa ku qanciyaan hubka iney dhigaan, isla markaana tabashadooda ay ku soo gudbiyaan qaab wadahadal, inkastoo aan la ogeyn sida ay taas u aqbali doonaan.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa dhowaan sheegay inuusan maamulkiisa aqbaleyn kooxo hubeysan ay dhex jooga degaano ka tirsan Galmudug.
Previous articleMaxkamad xukuntay Saraakiil Kenyan ah oo loo heystay dilka haweeney Soomaali ah
Next articleDowlada Somalia oo War ka soo saartay Muuqaalo ay dhowaan ay baahisay Al-Shabaab